Shaydaan Tukada! – Cabdicasiis Guudcadde
July 8, 2016 August 1, 2016 Guudcadde
Waxa jirta sharraxaad caan ah oo ay bixiyaan wadaaddada diintu (Islaamka khaasatan). Shaydaan gaar ahi in uu qofka ku furo xasuusashadan iyo xalintan dhaynaamigga ah ayaa la xusaa. Magac ayaa uu xataa leeyahay shaydaankani. Khanzab. Waxa ay sheegaan in oday Khanzab uu qofka geliyo badweyntaa, si uu “uga waswaasiyo ugana mashquuliyo” salaaddii qofka. Wayddiimo iyo dhibaatooyin badan ayaa ay waajahaysaa fasiraaddani, oo ay ka mid yihiin kuwa aynu taxnay hoos.
In wax la xasuusto waxna la xaliyaa (salaad iyo salaad-la’aanba) waa falal wanaagsan. Shaydaankana waxa lagu yaqaanay in uu dhiirrigeliyo, kuna shaqo leeyahay falalka xunxun e, maxay ayaa uu ahaa shaydaankan jebiyay xeerkii lagu bartay reer tolkii?
Shaydaanku, sida Qur’aanku ina barayo, awood uma laha in uu qofka ku qaado samaynta fal cayiman. Taa lidkeed, martiqaad ayaa uu awoodaa uu qofka ku casuumayo samaynta fal qeexan; in uu u qurxiyo, in uu ku dhiirrigeliyo iyo in uu u soo jeediyaba waa uu karaa. Falalka shaydaanku qofka ku dhiirrigeliyo, ama u qurxiyaa, waa kuwo dhammaan uu qofku awood u leeyahay in uu raaco, ama in uu diido. Xasuusashada iyo xalintu waa wax aan la xidhiidhin falalka ruuxu xakamayn karo. Ma qof baa isdiidsiin kara in uu wax xasuusto, ama uu arrin xal u helo?! Waa wax iskood u shaqeeya. Dhanka kale, maxaa uu ahaa shaydaanka qofka “waswaasinayaa?” Waxa aynu filanaynay in uu qofka u soo bandhigo in uu “waswaaso,” dabadeedna qofku qaato ama diido soojeedintaa.
Haddii la dhaho, “Oday Khanzab *waswaasin* ayaa uu qofka ku keenayaa,” maxaa uu u doortay in uu ‘xasuusin iyo xalkeenid’ uun u soo maro ee uu *waswaasintiisa* ugu fushan waayay waddo kale?
Haddii laguba adkaysto in falka uu shaydaanku samaynayaa tahay “waswaasin” iyo khalkhalgelin uu gelinayo khalkhal habsami-u-socodkii salaadda, ee aanay ahayn in uu xasuus iyo ku keenayo xalal, kiisku waa uu isbeddelayaa, oo fasir uma noqon karo markan arrinkii aynu ku bilawnnay qoraalka.
Qofku marka uu tukanayo, weliba uu *khushuucsan* yahay, miyaanu awel ku jirin ilaallada Eebbe, maxaa uu ahaa shaydaankan soo jiidhay daa’irada ee meesha ka adeegayaa? Shaydaankani se sidee ayaa salaadda ku soo galay, oo qofka ugu yimi? Isaguna ma shaydaan tukanayaa?!
Qofka Muslimka ah ee hor Alle u tukanaya, weliba *khushuucsan,* maxaa ay tahay xikmadda ka danbaysa in shaydaan lagu daawado isaga oo salaaddiisii wax yeelaya? Ilaahay miyaynaan ka filayn in uu ilaashado cibaadaystihiisan dartii u tukanaya; oo ka ilaashado raadaynta shaydaan idilkii?
“Khanzab” ma hal shaydaan ah baa, mise waa koox? Haddii uu mid keli ah yahay, sidee ayaa ay ugu suuragashaa in uu dad badan dhammaantood, ama ugu badnaantood, ku furo tashuushkaa xasuusinta iyo xalkeenidda ah, isla hal mar? Ma isaga uun baa isu qaybiya khalquunka tukanaya? Dheereeyaa!
Haddii se uu yahay koox gooni ah, tiradoodu waa intee? Dadka tukada miyaa ay ka yar yihiin, mise waa ay ka badan yihiin? Haddii ay ka yar yihiin, isla su’aashii u taallay haddii uu hal yahay ayaa u taalla (su’aal #7); haddii ay ka badan yihiinna, inta hawshooda qabsanaysa ma ogi e, intii kale maxaa ay qabanayaan?
Wayddiimahaa oo aan haysan warcelinno ilaa hadda la arko, ayaa innagu qaadaya in aynu sharraxaad kale ka fekerno. Waa faahfaahin kasma-nafeedsan.
Qofku marka uu salaadda galo, waxa uu aaminsan yahay in uu Abuurihiisii Weynaa hor taagan yahay. Waxa ruuxa ku dhalanaysa isxilqaan badan oo iska xilqaamayo sidii uu iskaga dhisi lahaa Ilaahay, una gudan lahaa salaad Eebbe qancisa, oo qofkana mushqaayad fiican u jarta. Qofku Ilaahiisa ayaa uu istusayaa e dadka isma tusayo, ama in uu istuso ma aha. Sidaas darteed ayaa uu u badinayaa *khushuucda.* Waayo waxa loo sheegay in mar kasta oo *khushuucdiisu* badato, uu badanayo xaddiga ajar ee uu helayaa. Kolkaa, marba haddii uu la yimaaddo *khushuuc* badan, waxa uu isku qancinayaa in uu helay raalli ahaanshihii Eebbe; natiijo ahaanna, degganaansho ayaa uu helayaa nafeed.
Marka qofku, haddaba, uu naftiisa oo dhan soo xaaddiriyo, sii u kasbado kalsoonida Alle, waxa uu qofku gelayaa xaalad “Maquurasho (meditation)” ah. Waxa uu qofku ka “maquuranayaa” deegaankii debadda ee buuqa miidhnaa, waxa uuna u “maquuranayaa” deegaan gudeed oo degganaan uu ku dareemayo. Maquurashadani waxa ay sababaysaa in qofka maskaxdiisu hesho kansho badan oo ay ku debbarto arrimaha u yaalla. Waayo? Marka aynu leennahay qofkaasi waa *khushuucsan* yahay, waxa keli ah ee aynu u jeednaa waa in qalbigiisu mashquulsan yahay, oo falkan uu hayaa jiitay. Laakiin maankii qofku waa uu madaxbannaan yahay, waayo waa kala labo qalbiga iyo caqligu. Waxyaabaha ruuxiga ah ee qalbigiisa ka dhex dhacay, qofku ma maamuli karo, mana yaqaan cabbirkooda.
Qofkii waxa uu gelayaa xaalad uu ku kulmin karo waxyaabo badan. Sidaas darteed ayaa aad u arkaysaa qofkii oo xasuusanaya wax uu illawsanaa intii aanu salaadda gelin, ama/oo xallinaya wax ku adkaa ka hor salaadda. Waxa kiiskan oo kale uu dhacaa marka qofku ku hoos qubaysanayo biyo xagga sare kaga imanaya. Markanna tolow! ma shaydaan baa u yimaadda qofka? Dabcan markanna qofku waa uu maquurtaa, oo waxa uu ka dhex baxaa, nafsad ahaan, waxyaabihii bannaankiisa ka dhex dhacayay. Maskaxda qaybta fekerka u qaabbilsanina waxa ay iska wadataa shaqadeeda. Sidaa si u eg ayaa dhacda marka salaadda lagu jirana. Haddii marka qofku maquurashada rootiiniga ah (routine meditation) samaynayo, uu indhaha isku qabto si uu uga dhex baxo deegaanka debadda, markan salaadda waxa qofka la amray, oo uu fuliyaana, in xorriyadda uu ka qaado araggiisa. Qofku ma eegi karo hareerihiisa iyo gadaashiisa midna xilliga uu tukanayo – baala-daymoodo. Dabadeedna hawshii maskaxda kaga bixi lahayd turjumidda waxa indhuhu arkayaan, waxa loo adeegsadaa fekerid… xasuusasho iyo xalin.
Sidaas awgeed ayaa ay u sahlanaanaysaa in la qaato sharraaxaddan kasma-nafeedsan. Balse waa ay adkaanaysaa in fasir loo helo jiritaanka iyo saamaynta shaydaankan tukada!
Previous Caalamka Akhriska
Next Dugsi Weeye Noloshu!
Shaydaan Tukada! — Cabdicasiis Guudcadde | omariyusuf's Blog says:
[…] via Shaydaan Tukada! — Cabdicasiis Guudcadde […]